Sida loo sameeyo miisaaniyad qaabaynta webka | Talooyin iyo Kheyraad | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Naqshadeynta Webka
Waxa ugu adag marka la bilaabayo ka shaqeynta adduunka ee naqshadeynta websaydhka ayaa ah samee miisaaniyad. Waa tillaabada ugu qalafsan ee la qaado iyo tan nagu soo dhaweynaysa adduunka shaqada oo naga fogeynaysa ardayga. Dhammaanteenna waxaan ka wada shakisan nahay wax isku mid ah: Miyaan wax badan ka qaadaa? Maxaan ku qaadaa? Sideen ku qoraa?
In Creativos Online hadda waxaan wax uga qabaneynaa isla arintan laakiin dhanka qaabeynta qaabeynta, oo waxaan aragnay in qoraalladani ay waxtar weyn kuu leeyihiin. Sababtaas awgeed waxaan go'aansaday inaan qoro noocan ah hage ku saabsan sida loo sameeyo a xigasho naqshadeynta webka, taas oo aan filayo inaad waxtar u leedahay. Xusuusnow inaad faallo ka bixin kartid isaga qeybta faallooyinka dhamaadka boostada.
1 Waxyaabaha saameeya miisaaniyadda qaabeynta webka
1.5 Isbedelada macaamiisha
1.6 Cabbirka macaamiisha
2 Qaybaha xigashada naqshadeynta websaydhka
3 Kheyraadka kaa caawinaya qoritaanka miisaaniyadda qaabeynta webka
Waxyaabaha saameeya miisaaniyadda qaabeynta webka
Web sameeyey "bareback": taasi waa, iyada oo aan lahayn maamule maareyn. Waa inaad ku qortaa HTML, CSS iyo lambarka PHP si aad qayb kasta ugu dhigto bartaada, go'aan uga gaarto muuqaalkeeda, iwm. Macaamiilku, si uu wax uga beddelo waxyaabaha ku jira bogga, waa inuu bartaa inuu dhex maro koodhka si uu sidaa u sameeyo (wax aan caadi ahayn) ama waa inuu noo yimaadaa si uu u codsado tixgelin si loo cusbooneysiiyo.
Web leh CMS (WordPress, Prestashop, Magento, Joomla ...): oo leh maamulaha maaddada. Sidan oo kale, macmiilku wuxuu lahaan doonaa guddi maamul oo dareen leh oo raaxo leh oo ay ka cusbooneysiin karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyagoon u baahan fiiro gaar ah. Haa, waad noo baahan doontaa markaad cusbooneysiineyso nooca CMS, ku darida howlaha, iwm.
Squad bilaash: xaalad aan caadi ahayn. Waxaan ku soo dallaci lahayn rakibaadda template-ka iyo qaabeynta aasaasiga (sida astaanta macaamiisha).
Qaab bilaash ah shaqsiyeysan: sidoo kale, naadir. Waxaan isla lacagtaas ka qaadan doonnaa qaybtii hore oo lagu daray u qaabeynta midabada webka, qaabeynta waxyaabaha ay ka kooban tahay (noocyada, cabirka, margins ...), iwm.
Template Premium: ugu badan. Waxaan ku qasbanaan lahayn inaanu lacag ka qaadno kharashka template-ka laftiisa, rakibideeda iyo qaabeynta aasaasiga.
Squad premium la habeeyay: kuwa ugu caansan. Wixii lagu sheegay qeybtii hore, ku dar qaabeynta midabada webka, qaabeynta nuxurka, rakibida qalab si aad u hesho waxyaabo gaar ah oo khaas ah (sliders ...).
Naqshad laga bilaabo bilowga: taasi waa, teeb garaynta HTML saafi ah iyo nambarka CSS iyo naqshadaynta dhammaan qaybaha garaafka ee Photoshop. Waa ikhtiyaarka ugu qaalisan, sida iska cad, sababtoo ah waqtiga ay tahay inaan u hurno.
Inbadan qaybaha, miisaaniyad sare. Caqli gal, sax?
Qiimaha sawiro webka waxaa qaadaya macmiilka. Waa in si cad loo cadeeyaa bilowga. Mana aha wax la mid ah haddii ay tahay inaan ka raadinno sawirrada kayd sawirro ah (waa ku dallaci doonnaa) marka loo eego haddii macmiilku sameeyo oo uu noo soo diro.
luqadood: Maaha isku mid in bog internet lagu sameeyo hal luuqad halkii laga dhigi lahaa labo ama saddex. Fikrad ahaan, had iyo jeer waa macaamilka kan na siiya qoraallada la tarjumay.
Immisa waqti yar Macmiilku wuxuu nooga tagayaa sameynta shabakadda, sida ugu dhakhsaha badan ee aan u shaqeyn doonno iyo sida qaaliga ah ee mashruucu u noqon doono.
Sida naqshadeynta garaafka, qiimaha bilowga ee miisaaniyadda way wanaagsan tahay in la muujiyo tirada dib u eegista bilaashka ah (dammaanad ahaan) oo aan ka fikirayno in macmiilku sameyn karo. Marka tiradaas la dhaafo, waa inaan aruurino qadarka aan tilmaamnay. Dadka qaarkiis, halkii ay ka dalban lahaayeen wax ka beddel kasta, waxay kaa qaadaan inta saacadood ee ay qaadanayso in la sameeyo isbeddelka.
Maaha wax la mid ah in loo sameeyo degel websaydh yar oo iskiis u shaqeysta oo bilaabaya tacaburkiisa, in loo sameeyo bog u gaar ah dalal badan.
Qaybaha xigashada naqshadeynta websaydhka
Ugu horreyntii: xogta macaamiisha, xogtaada, taariikhda, lambarka qaansheegta ...
Madal horumarineed iyo qalab
Naqshadeynta iyo qaabeynta
Marti gelinta iyo domainka
Tababar iyo caawin
Kheyraadka kaa caawinaya qoritaanka miisaaniyadda qaabeynta webka
Habka miisaaniyada webka loo qoro Creativasfera
Habka miisaaniyadda naqshadeynta websaydhka (laga bilaabo 2009)
Tusaale qandaraas, horumarsan oo "aan rasmi ahayn"
Qiimeynta iyo miisaaniyadaha horumarinta webka
Talooyin markaad diyaarinayso miisaaniyadda
Macluumaad dheeraad ah - Sida loo qorsheeyo qaabeynta qaabdhismeedka shaxanka | Talooyin iyo Kheyraad
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Sida loo sameeyo miisaaniyad qaabaynta webka | Talooyin iyo Kheyraad
Aad u xiiso badan, si kastaba ha noqotee waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay inaan ku daro wax aad muhiim u ah: Falanqee waqtiga goobta la horumarin doono. Mararka qaar qandaraaslaha ma haysto wax walba oo diyaar ah, ama qof ayaa saameyn ku leh go'aanka dhexdhexaadka ah taasna waxay si weyn u beddeleysaa miisaaniyadda. Marka la soo koobo, waxaan aaminsanahay inay tahay inaan marwalba falanqeyno bilowga waqtiga uu macaamilkani naga qabsan karo (dheeraad ah) oo ka baxsan abuuritaanka goobta.
Ku jawaab noriaki
Run badan. Dareenkeenu waa mid aad muhiim u ah, iyo ogaanshaha la macaamilidda macmiil haysta fikrad aad u cad oo ku saabsan waxa ay rabaan inaysan la mid ahayn la macaamilidda midka ku dhex wareegaya fikradaha kala duwan. Aad ayey u adag tahay in si sax ah loo xisaabiyo waqtiga ...
Khibradeyda waxaan dhihi karaa macmiil kastaa wuu ka duwan yahay. Fikradaha guud ee lagu sharaxay maqaalka waa hagaagsan yihiin, laakiin aakhirka waa khibradeena gaarka ah ee inoo horseedi doonta guul ama guuldarro.
Sannadihii aan shaqeynayay oo dhan, macaamiil aad u tiro yar ayaa ii soo gaarsiiyay wax kasta oo aan u baahanahay (astaamo, qoraallo, sawirro, iwm.) Waqtigii loogu talagalay. Mid ayaa aad ugu adkaan kara habka shaqada, laakiin markaa xaqiiqda ayaa ku dharbaaxeysa oo haddii aad rabto inaad shaqeyso dhammaadka waa inaad wax yar la qabsataa macmiil kasta ...
Naqshadeynta Webka León dijo
Si aad ufiican ayaa loo daboolay qodobbada si loo abuuro miisaaniyad loo qaabeeyo degel. Waxay noqon laheyd lagama maarmaan in wax yar lagu dardaro naqshadeynta websaydhka mobilada iyo kiniiniyada, kuwaas oo ka hela booqashooyin aad iyo aad u badan qalabkan.
Jawaab Web Design León
Shabakadaha dhaqaalaha dijo
Taladayda ugu weyn ee ku saabsan miisaaniyadda ayaa ah in lagu daro dhammaan faahfaahinta sidoo kale? sida loo dejiyo faahfaahinta naqshadeynta, qaababka lacag bixinta iyo waqtiyada dirista, si wax walba ay ugu caddaadaan labada dhinacba ka hor inta aysan bilaabin shaqada sidaasna looga fogaado is faham la’aanta dambe. Waxaa ugufiican in wax walboo qoraal ah looga tago dukumiinti aan labadeenuba hayno oo aan ku darno soo jeedinta naqshadeynta iyo miisaaniyadda labadaba. Waxaan kugu hambalyeynayaa tabarucaadkaaga, waxaad ka dhigtay hawshan mid aad ii fudud, oo marka hore u muuqda culays laakiin aakhirka ay tahay in la sameeyo. Salaan iga timid Mexico.
Ujawaab Websaydhyada Rakhiiska ah